Whonix kugovera kwakagadzirwa kuti ipe isingazivikanwe kutaurirana | Linux Vakapindwa muropa
Whonix kugovera kunogadzirwa kuti ipe isingazivikanwe kutaurirana
Whonix kugoverwa kweLinux yakagadzirirwa kupa yakasimbiswa kusazivikanwa, chengetedzo uye chengetedzo yeruzivo rwepachivande. Kugovera yakavakirwa paDebian uye inoshandisa Tor kuona kusazivikanwa.
Chinhu chakasarudzika cheWhonix kupatsanurwa kwetikiti rekugovera muzvikamu zviviri yakaiswa zvakasiyana: Whonix-Gedhi pamwe nekumisikidzwa kwenetigedhi gedhi rekusazivikanwa kutaurirana uye Whonix-Workstation nekombuta komputa.
1 Nezve Whonix
2 Chii chitsva muWhonix 15?
Iyo network inowanikwa kubva kuWhonix-Workstation nharaunda chete kuburikidza neWhonix Gateway, iyo inoparadzanisa nharaunda yebasa kubva mukubatana kwakananga nenyika yekunze uye inobvumira chete enhema network kero kuti ishandiswe.
Maitiro aya anodzivirira mushandisi kubva mukudonha chaiyo IP kero mune chiitiko chewebhu browser uye uye kunyangwe paanoshandisa zvishuwo zvinopa anorwisa midzi kupinda kune iyo system.
Muchiitiko chekuti Whonix-Workstation ikave inokanganiswa, zvinongobvumidza anorwisa kuti awane chete dummy network marongero, sezvo iyo chaiyo IP uye DNS marongero akavanzwa kunze kwenzvimbo yegedhi iyo inongotumira traffic kuburikidza neTor.
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti Whonix zvinhu zvakagadzirirwa kumhanya senzira dzevaenzis, ndiko kuti, mukana wekushandisa zvakakomba 0-zuva kusagadzikana mumapuratifomu ehurongwa ayo anogona kupa mukana kune inomiririra system haina kusiiwa.
Naizvozvo, hazvikurudzirwe kumhanyisa iyo Whonix-Workstation pakombuta imwechete seWhonix-Gateway.
Whonix Workstation inopa default Xfce nharaunda yevashandisi. Iko kuendesa kunosanganisira zvirongwa zvakaita seVLC, Tor Browser (Firefox), Thunderbird + TorBirdy, Pidgin, nezvimwe.
Mune iyo Whonix-Gateway kuendesa, iwe unogona kuwana seti yeserver kunyorera, kusanganisira Apache httpd, ngnix uye IRC maseva, ayo anogona kushandiswa kuronga basa reTor rakavanzika masevhisi.
Izvo zvinokwanisika kupfuura pamusoro peTor tunnels yeFreenet, i2p, JonDonym, SSH uye VPN. Kana zvichidikanwa, mushandisi anogona kubata chete Whonix-Gateway uye kubatanidza kuburikidza nayo kune avo echinyakare masisitimu, kusanganisira Windows, izvo zvinoita kuti zvikwanise kupa isingazivikanwe kubuda kwenzvimbo dzebasa idzo dzave kushandiswa.
Chii chitsva muWhonix 15?
Mushure megore rinenge rekuvandudza, iyo Whonix vhezheni 15, mariri iyi vhezheni yakavakirwa paDebian 10 (buster) uye pachinzvimbo che KDE, iyo Xfce desktop inogoneswa nekutadza.
Zve systemd vagadziri vakasanganisira iyo yekumisikidza masetingi eiyo sandbox yekuzviparadzanisa zvikamu (YakavanzikaTmp = yechokwadi uye YakavanzikaHome = ichokwadi) pamwe nekuvandudza entropy kuunganidzwa kwepseudo-isina nhamba nhamba jenareta (jitterentropy-rngd package yakaiswa).
Uyewo yakaiswa yekuwedzera kuchengetedzwa kubva kuSpecter, Meltdown uye L1 Terminal Fault kurwisa, neizvi mukumisikidzwa kwerutsigiro rwekushanda mune live mode pamwe nekuiswa kwedata mu RAM uye kwete pane diski.
Pane maviri bhuti modes grub-live uye ro-mode-init (otomatiki gonesa live mode kana unit ichiverengwa-chete).
Mifananidzo yemaonero ehurongwa yakaderedzwawo muhukuru (yakagadzirirwa kushandisa zerofree). Iyo Whonix-Gateway mufananidzo uri pasi kubva 1.7 kusvika 1.1 GB, uye iyo Whonix-Workstation kubva 2 kusvika 1.3 GB.
Kune vashandisi veVirtualBox, iyo CLI inovaka yakagadzirirwa pasina graphical interface. Iyo Whonix-Gateway uye Whonix-Workstation zvikamu zvakabatana muchimiro chemumwechete ova mufananidzo.
De Dzimwe shanduko dzakaratidzwa nevakagadzira iyi vhezheni itsva ndeiyi:
Yakareruka Chikamu Kuisirwa kweQubes
Whonix KVM inowedzera koni yekutsigira kuburikidza ne serial port
ARM64 uye Raspberry Pi rutsigiro
Iyo yakakosha sisitimu inosanganisira zulucrypt, qtox, onionhare, keepassxc, uye firejail kunyorera. Mitsara yakawedzerwa ye scurlget, curlget, pwchange, kusimudzira-nonroot, apt-kuwana-isiri-inoshanda, uye apt-kuwana-kugadzirisa-pamwe.
Wakawedzera rutsigiro rweBisq P2P network.
Mufananidzo weiyo CLI muyenzi system iri 1.1 GB uye Xfce desktop iri 1.3 GB.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Whonix kugovera kunogadzirwa kuti ipe isingazivikanwe kutaurirana
Makwikwi anotanga Ubuntu 19.10 Eoan Ermine Wallpaper
Shakti: processor yeIndia iri pano ...